Ceni: “Tsy azo atao ny fihetsiketsehana an-dalambe” | NewsMada
Ceni: “Tsy azo atao ny fihetsiketsehana an-dalambe”
Mitohy ny fampielezan-kevitra… Tsy azo atao ny fihetsiketsehana an-dalambe manelingelina ny fifamezivezen’ny olona, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny Ceni.
“Tsy azo atao ny manao fihetsiketsehana mamory vahoaka eny an-dalambe, ny manapaka lalana, ny manelingelina, na amin’ny fomba inona na inona, ny fifamevivezen’ny vahoaka eny an-dalambe.” Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fanarahan-dalàna amin’izao fampielezan-kevitra fifidianana solombavambahoaka izao.
Izay ny anton’ny anaovana fanambarana mialoha any amin’ny lehiben’ny distrika na ny préfet ny anombohana sy ny aleha ary ny amaranana ny filaharambe. Rehefa hitany hoe hiteraka fanakorontanana izany filaharambe na fiara mitajozotra eny an-dalambe izany, azony sakanana ary tokony hofoanany.
Tsy maintsy mandray fepetra ary tomponandraikitra ireo manao fampielezan-kevitra mba hametrahana filaminana. Tsy maintsy tandrovina ny fahazoan’ny vahoaka mifamezivezy fa tsy tapahina ny lalana na sembantsembanina ny fifamezivezen’ny olona amin’izany.
Misy fetra ny fametrahana petadrindrina
Misy toerana natokan’ny Ceni sy ny kaominina, manerana an’i Madagasikara, ametrahana petadrindrina ara-pifidianana. Na amin’ny toeran’olon-tsotra ka omeny alalana ny kandidà hametaka izany: eny amin’ny trano na tambohony, ohatra.
Tsy azo atao ny mametaka petadrindrina eny amin’ny fefy na ny tranom-panjakana, fefy na trano fivavahana, fefy na rindrin’ny trano manan-tantara kolontsaina, takelaka fanaovana dokambarotra. Raha mitranga izay, mandefa fampitandrema na ny Ceni. Raha tsy manala izay ilay kandidà, anjaran’ny Ceni ny mandray fepetra ny hanala ireny petadrindrina ireny ary manome lamandy ara-bola azy.
Tsy manana fahefana ny Ceni
Tsy manana fahefana hisambotra sy hitsara ary hanasazy ny Ceni manoloana ny tsy fanarahan-dalàna fa ny manao fanabeazana sy ny manentana. Anjaran’ny mpifidy, ny kandidà sy ny solontenany, ny mpanara-maso fifidianana ny mitory sy mitondra porofo ary mijoro ho vavolombelona eny anivon’ny fitsarana, raha mahita tsy fanarahan-dalàna.
“Tsy mitsahatra hanao fanentanana izahay ho an’ny rehetra ary hanao fampitandremana ho an’izay mandika lalàna”, hoy izy. Raha ilaina aza, hametraka fitoriana ry zareo raha mahazo ny porofo sy ny fitarainana momba izany. Zon’ny Ceni toy ny rehetra koa ny mitory eny anivon’ny fitsarana.